Fampandrosoana amin’izay izao… | NewsMada
Fampandrosoana amin’izay izao…
Par Taratra sur 30/11/2019
Vita iny ny fandatsaham-bato sy ny fanisam-bato tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna. Hanao ahoana? Andrasana amim-pitoniana sy amim-pahendrena ny voka-pifidianana farany, na ny vonjimaika na ny ofisialy: safidim-bahoaka. Efa fantatra sy mazava ny fironan’izany? Arahaba soa, arahaba tsara…
Amin’izany, mby amin’ny hoe faneken’ny rehetra ny voka-pifidianana indray izao. Ady fiady izay heverina sy hita ho tsy fahalavorariana tetsy sy teroa. Saingy mba atao amin’ny ara-dalàna ny fitarainana sy fitoriana. Mba ho azo raisina sy mitombina izany: misy antontan-taratasin’ady mazava, porofo, ijoroana ho vavolombelona…
Ho araka ny fombafomba sy dingana ara-dalàna ny raharaha, fa tsy fanakorontanana na fitsikerana befahatany. Aleo ny fitsarana mahefa no ho tompon’ny teny farany. Na amin’ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy izany, na amin’ny fitsarana izay mety ho fitarainana sy fitoriana. Mila fitoniana sy fahendrena izay.
Izay aloha ny fandatsaham-bato vita, na inona fomba fijery sy lazaina. Resaka hafa ny amin’ny taham-pandraisana anjaran’ny mpifidy. Politika tsy mahafa-bela ny tsirairay sy ny rehetra fa tsy inona: nahoana no tsy mitsaha-mihena ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy tato ho ato? Maro ny anton’izay, samy manana ny fijeriny.
Mandra-pitrangan’izay hitranga aloha, mila mandeha amin’ny asa fampandrosoana haingana sy mivaingana amin’izay izao. Tsy hisy inona ho vanona amin’izany, raha mbola korontan-dava hatrany… Tsy fanakorontana ny hoe fanoherana, raha misy tsy zaka na tsy mety amin’ny tena. Mifanome tanana aza, raha mbola azo atao.
Izay tsy fahamarin-toerana politika izay no anisan’ny mampihena hatrany ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy amin’ny fifidianana? Tsy mety milamina sady tsy marina tsinona izay atao… Mila fanovana amin’izay ahay: tsy aleo hiasa sy hotsarain’ny mpifidy amin’izany izay voafidy? Mba fampandrosoana amin’izay izao no atao…